Dowladda Soomaaliya oo ka qeyb gashay shir ka furmay Tunis. – XAMAR POST
Dowladda Soomaaliya oo ka qeyb gashay shir ka furmay Tunis.
By Mohamed Abdi On Mar 3, 2022
Wasiirka Wasaaraa Amniga Gudaha ee XFS Cabdullahi Maxamed Nuur iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo ku sugan dalka Tunisia waxaa ay halkaa ugu qeyb galeen shirka 39-da ee Golaha Wasiirada arimaha gudaha iyo Amniga Carabta.
Wasiir Cabdullaahi ayaa inta uu socday shirka waxaa uu kulamo kale duwan la qaatay Madaxweynaha Tunisia, Kais Saied, Wasiirka Arimaha gudaha Masar, Mahmoud Tawfik , Wasiirka arimaha gudaha iraq Othman Al-Ghanmi, Xoghayaha guud ee golaha Wasiirada arimaha gudaha carabta, Dr. Mohammed Bin Ali Koman iyo Masuuliyiin kale.
Sidoo kale, Wasiirka ayaa la sheegay in uu halkaa kasii wadi doono kulamada uu la qaadanayo madaxda shirka kasoo qeyb galeyso, isagoo xusay in uu kala hadlo arrimaha amniga iyo xoojinta xiriirka Soomaaliya ay laleedahay wadamadaas.
Musharax sheegay in loo diiday in uu ku tartamo kursi yaala Baydhabo.